Robin Williams – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) Unicode ၂၀၀၆ ကတညျးက စတငျအောငျမွငျခဲ့တဲ့ အမရေိကနျဟာသဇာတျလမျးရဲ့ တတိယမွောကျ ဇာတျလမျးတှဲဖွဈသလို နောကျဆုံးဇာတျလမျးလညျးဖွဈတဲ့ ဇာတျကားသဈအကွောငျး ပွောပွခငျြပါတယျ။၁၉၃၈ တုနျးက ရှေးဟောငျးသုတသေနပညာရှငျအဖှဲ့ဟာ အဖိုးတနျရှေးဟောငျးပစ်စညျးတဈခုကိုရှာဖှဖေို့ အီဂဈြဂူသင်ျခြိုငျးတဈခုကို တူးဖျောပါတယျ။ ဂူသင်ျခြိုငျးထဲကိုကောငျလေးတဈယောကျ ပွုတျကရြာကနေ သူ့ဖခငျနဲ့ အခွားရှေးဟောငျးသုတသေန ပညာရှငျတှကေို လမျးကွောငျးရှာပေးနိုငျခဲ့ပွီး ဖာရိုဘုရငျရဲ့ ကမ်ပညျးထိုးထားတဲ့ရှခေပျြပွားကိုရှာတှခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျတော့ ရှကေမ်ပညျးပွားကို နှဈပေါငျးမြားစှာထိနျးသိမျးထားပါတယျ။ယနခေ့တျေ နယူးယောကျမွို့က သဘာဝသမိုငျးပွတိုကျကွီးမှာ အခမျးအနားကွီးတဈခုလုပျနပွေီး ဒေါကျတာမကျပီး တကျရောကျလာတာကို ပွတိုကျလုံခွုံရေးဖွဈတဲ့ လာရီဒါလကေတှပေ့ါတယျ။ Night at the Museum အရငျဇာတျကားတှအေတိုငျးပဲ ပွတိုကျက အရုပျတှေ အသကျဝငျပွီး သူတို့အသကျရှငျစဉျကနခေဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုငျးနရေငျး ပွတိုကျထဲမှာ ဖွဈခငျြတိုငျးဖွဈနပေါတယျ။ အီဂဈြဂူသင်ျခြိုငျးထဲက ရှကေမ်ပညျးပွားက နယူးယောကျသဘာဝသမိုငျးပွတိုကျထဲမှာ ထိနျးသိမျးထားတာဖွဈပွီး အဲဒီပစ်စညျး တဖွညျးဖွညျးပကျြစီးလာတာကို ဘယျသူမှ သတိမထားမိကွပါဘူး။ ကမ်ပညျးပွားကွောငျ့ အခမျးအနား က ပရမျးပတာတှဖွေဈပွီး ဧညျ့သညျတှကေို တိုကျခိုကျတာမြိုးတှဖွေဈပွီးတဲ့နောကျ အရာအားလုံးတညျငွိမျသှားပမေယျ့ ကမ်ပညျးပွားကွောငျ့လို့တော့မသိခဲ့ကွပါဘူး။ တဈရကျမှာ လာရီဟာ ...
IMDB: 6.2/10 10322 votes
Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) Unicode ပွတိုကျစောငျ့ Ben သညျ ပွတိုကျ ကို ညဘကျစောငျ့သောအခါ ပွတိုကျထဲတှငျ ထားသော သမိုငျးဝငျအရုပျ မြား၊ ဒိုငျနိုဆောအရုပျမြား ၊ လူပုလေးအရုပျ မြား နှငျ့ အခွားမြားစှားသော အရုပျမြားကွားတှငျ ဘယျလို ဇာတျလမျးဆကျမလဲ ဆိုတာကို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ ဒီ ဇာတျလမျးသညျ Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Family စသော ရသမြားကို ခံစားနိုငျပွီး ဒါရိုကျတာ Shawn Levy ရိုကျ ကူးထားသော ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈပါသညျ……….. Credit Review Zawgyi ပြတိုက်စောင့် Ben သည် ပြတိုက် ကို ညဘက်စောင့်သောအခါ ပြတိုက်ထဲတွင် ထားသော သမိုင်းဝင်အရုပ် များ၊ ဒိုင်နိုဆောအရုပ်များ ၊ လူပုလေးအရုပ် များ နှင့် အခြားများစွားသော အရုပ်များကြားတွင် ဘယ်လို ဇာတ်လမ်းဆက်မလဲ ဆိုတာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒီ ဇာတ်လမ်းသည် Action, ...
IMDB: 6.0/10 169733 votes
Jumanji (1995) Unicode ကြှနျတျောတို့ငယျငယျလေးတုနျးကကွညျ့ခဲ့ဖူးတဲ့ Jumanji ဇာတျကားလေးကို ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဇာတျလမျးရဲ့အစမှာ ကောငျလေးနှဈယောကျက သဈတောကွီးထဲမှာ တဈခုခုကိုမွုပျနှံဖို့ကွိုးစားနပေါတယျ။ သူတို့မွုပျနှံမယျ့အရာကဘာလဲဆိုတာကတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးသိကွတဲ့ Jumanji လို့ချေါတဲ့ကစားနညျးစာအုပျပါပဲ။ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ အယျလနျလို့ချေါတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျဟာ Jumanji လို့ချေါတဲ့ ကစားနညျးစာအုပျကို ရှာတှခေဲ့ပါတယျ။ အိမျကိုယူသှားပွီးတော့ သူ့သူငယျခငျြးကောငျမလေးဖွဈတဲ့ ဆာရာနဲ့ဆော့ဖို့တိုငျပငျနတေုနျးမှာ ဆာရာက Jumanji ထဲမှာပါတဲ့ အံစာတုံးနှဈတုံးကို အမှတျတမဲ့ပဈခလြိုကျရာကနေ ကစားနညျးဟာအသကျဝငျသှားပါတော့တယျ။ Jumanji ရဲ့စညျးကမျးခကျြကတော့ စဆော့မိပွီဆိုရငျ ပွီးဆုံးသညျတိုငျအောငျဆော့ရပါမယျတဲ့။ အယျလနျဆိုတဲ့ကောငျလေးက အံစာတုံးခေါကျလိုကျမိနရောကနေ နံပတျ ၅ဒါမှမဟုတျ နံပတျ ၈ ကို တဈခွားတဈစုံတဈယောကျက မခေါကျမိမခငျြး တောထဲမှာနရေပါမယျတဲ့။ ဆာရာကတော့ ထှကျပွေးသှားပွီးတော့ နောကျနှဈအနညျးငယျအကွာမှာ အဲ့အိမျကိုတဈစုံတဈယောကျရဲ့ မိသားစုတှကေပွောငျးလာပါတယျ။ အဲ့မှာ အဲ့မိသားစုက မောငျနှမနှဈယောကျက ထိုကစားနညျးကိုဆကျကစားပွီးတော့ အယျလနျကို ပွနျချေါလိုကျမိပါတယျ။ အဲ့မှာ သူတို့တှအေားလုံး ဘယျလိုကွောကျမကျဖှယျ စိတျလှုပျရှားစရာအဖွဈအပကျြတှနေဲ့ကွုံတှရေ့မယျဆိုတာ.... အားလုံးပဲဇာတျကားလေးထဲမှာကွညျ့ရှူလိုကျကွရအောငျဗြာ။...။ ကြှနျတျောငယျငယျလေးကတညျးက ကွိုကျခဲ့ရတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားလေးဖွဈတာကွောငျ့မလို့ အခုပွနျကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲရှိနလေောကျမှာကွောငျ့မလို့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Credit Review Zawgyi ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Jumanji ဇာတ်ကားလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က သစ်တောကြီးထဲမှာ တစ်ခုခုကိုမြုပ်နှံဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူတို့မြုပ်နှံမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတာကတော့ ...
IMDB: 7.0/10 287834 votes
Patch Adams (1998) ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့ အပြင်လောကမှာ တကယ်ရှိတဲ့ လူထူးလူဆန်း ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်လေးပါ။ သူဟာ ဆရာဝန်၊ လူရွှင်တော၊ ပရဟိတာသမား၊ စာရေးသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Gesundheit! Institute ဆိုတဲ့ အခမဲ့ဆေးကုသရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ သူနဲ့ ပရဟိတသမားတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့က ဆေးရုံတွေ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေကို လူရွှင်တော်ပုံစံ ဝတ်ဆင်ပြီး ဖျော်ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို အခြေခံပြီး အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်တာအဒမ်စ်ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံတစ်ခုမှာ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တွေရဲ့ လူနာတွေကို တကယ်နားလည်မပေးတာတွေ၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း လူနာတွေကို ကူညီရင်းနဲ့ သတ်သေချင်စိတ်တွေ ပျောက်လာတာတွေကို ခံစားမိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးမှ ဆေးရုံကနေ ဆင်းလာပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်လာဖို့ ဆေးကျောင်းတက်ပါတော့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အမှောင်ခေတ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ လူနာတွေရဲ့ ...
IMDB: 6.8/10 95,621 votes
A.I. Artificial Intelligence (2001) ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒီကားကိုနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်တယ်….ဒီကားရိုက်တော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အော်စကာစကာတင်အဆင့်ပါခဲ့တယ်…ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်သက်ရင့်လာတာနဲ့အမျှ ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့နေရာမှာ တစ်ကားလုံးမဟုတ်တောင် အနည်းငယ်တော့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဒီကားကိုကြည့်မိရင် ခင်ဗျားတို့ ထင်ထားတာတခြားစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်..ဘာလို့ဆို ၁၀မိနစ်လောက်စထားတဲ့ plotတစ်ခုဟာ နောက်တစ်နေရာရောက်တော့ ခင်ဗျားတို့လုံးဝထင်မထားတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကိုချိုးကွေ့လိုက်တယ်…..အချိုးအကွေ့ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကားကိုတည်ဆောက်ထားတယ်…ဒါကြောင့်လည်း Steven Spielberg ဟေ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတာနေမယ်…ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲ စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ရေးသားမှုပိုင်းညံလေသလားမသိ ဒီကားကိုအညွှန်းဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိဘူး…ကောင်းလားလို့မေးရင်တော့ ပြန်ဖြေလို့ရတယ်….ကျွန်တော်တို့တွေလေထဲကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူကြတယ် တစ်ယောက်ယောက်က လေဘယ်မှာလဲပြဆိုရင် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြလို့မရဘူး ဒီတော့လေမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး လေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်…ဒီလိုပဲ ဒီကားရဲ့ကောင်းကွက်ကဘာလဲ ဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းကကောင်းတာလဲ music ပိုင်းလား plotပိုင်းလား သရုပ်ဆောင်ပိုင်းလား နည်းပညာပိုင်းလား..ဆိုတော့ လေရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေသလိုပြန်တုန့်ပြန်ရမယ်ထင်တယ်….အယ် ဒေါင်းမဲ့သူတွေအတွက် ဆင်ခြင်လို့ရအောင်ပြောလို့ရတာတော့တော့ရှိတယ် ..အမိုက်စားအက်ရှင်ခန်းတွေ …ဘီကီနီဝတ်အလှအပတွေ….၁၅၀၀ဖွဲ့ romantic ဆန်အကွက်တွေ မပါဘူး… Credit Review - CM
IMDB: 7.1/10 272,779 votes